Samsung Galaxy S6 Edge Plus အတွက်အကောင်းဆုံးသော Rom ဖြစ်သည် Androidsis
Francisco Ruiz | | ရွမ်, Samsung, လဲ tutorial
ဒီ Samsung Galaxy S6 Edge Plus ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့ဒီဗွီဒီယိုအသစ်မှာဒီနေ့ဘာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလို့ရလဲ Samsung Galaxy S6 Edge Plus အတွက်အကောင်းဆုံးသော Rom ယင်း၏မျိုးကွဲအများအပြား၌တည်၏။(G928C / I / G / F, G928T / W8, G928SKL, G9287C)
una Rom သည် Samsung Galaxy S8 ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်Bixby, Samsung မှ Touchwiz ၏ဗားရှင်းသစ်နှင့်ပင်၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများအားလုံးပါ ၀ င်သည် Display မှာအမြဲတမ်းအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒီ Rom ကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့အရာအားလုံးကိုဘာတွေမြင်ချင်လဲ၊ အဲဒါကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည့်ဖိုင်များကို ၀ င်ရောက်ပါ။ တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းကိုအသေးစိတ်သိပါသလား။ ဒီပို့စ်ရဲ့အစမှာသင်ကိုယ်တိုင်ဒီလက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာကိုဆက်ဖတ်နေတာဖြစ်လို့သင်မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးနဲ့ဒီ Rom ကိုစနစ်တကျ flash လုပ်ဖို့အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမဲ့အကြံပြုချက်အားလုံးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။
1 ဤရောမကို flash လုပ်ရန်သတိထားရမည့်လိုအပ်ချက်များ
2 Rom Khongloi V9 ကို flash လုပ်ရန်လိုအပ်သည်
ဤရောမကို flash လုပ်ရန်သတိထားရမည့်လိုအပ်ချက်များ
တစ်ဦးရှိ Samsung Galaxy S6 Edge Plus မော်ဒယ် SM-G928F သို့မဟုတ်အောက်ပါမျိုးကွဲ (G928C / I / G / F, G928T / W8, G928SKL, G9287C)
TWRP ပြုပြင်ထားသော Recovery ကိုဖျောက်ပါ
တစ်ဦးရှိ တစ်ခုလုံးကို operating system ၏ nadroid backup လုပ်ထား လိုလိုမယ်မယ်
တစ်ဦးရှိ TWRP Recovery ကိုယ်တိုင်မှကူးယူထားသော EFS ဖိုင်တွဲ ဒီမိတ္တူကိုလုံခြုံတဲ့နေရာမှာထားတယ်။
တစ်ဦးရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ applications များနှင့်အချက်အလက်အားလုံးကို Titanium Backup ဖြင့်ကူးယူပါ လုပ်ငန်းစဉ်ကတည်းကအရာအားလုံးကိုဖျက်လိမ့်မည်။
USB debugging လုပ်နိုင်ပါတယ်
ဘက်ထရီက 100 x 100 ကိုအားသွင်း
Rom Khongloi V9 ကို flash လုပ်ရန်လိုအပ်သည်
ဖိုင်များလိုအပ်သည် Rom Khongloi V9 ကို flash လုပ်ပါ ငါတို့အတွက် Samsung ရဲ့ Galaxy S6 Edge Plus အား သဟဇာတဖြစ်သော၊ ၎င်းတို့သည် ZIP ဖိုင်ပုံစံချထားသောဖိုင် ၂ ခုသာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့သည် internal memory သိုမဟုတ် external storage ထဲသို့ကူးယူကူးယူရမည်ဖြစ်သည်။
Rom Khongloi Nougat V9 အများပိုင် Rom ကိုပြုစုသူသည် Rom ၏ဖိုင်များကိုရွှေ့ပြီးကတည်းက XDA Developers သို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုကိုငါထားခဲ့တယ်။
ဤနေရာတွင် Rom Khongloi ၏တရားဝင်ဖိုရမ်သို့ဝင်ပါ.
ဗွီဒီယိုထဲမှာမင်းပြောတဲ့အတိုင်း Rom ကိုမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်နဲ့သန့်ရှင်းစွာတပ်ဆင်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ် ဒီ Drive နှစ်ခုကို Pen Drive တွင် decompress မလုပ်ပဲ copy လုပ်ပြီး USB OTG မှတဆင့် install လုပ်ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းမဖြစ်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Terminal ၏ internal memory မှ installation ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ Rom ကို flashing လုပ်နေစဉ်အတွင်း Internal Memory ၏ Wipe ကိုမလုပ်ပါနှင့်။
ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောဖိုင် (၂) ခုကို external သို့မဟုတ် internal memory ထဲသို့ကူးယူပြီးပြီဆိုလျှင်၊ Recovery mode မှာ restart လုပ်ပါ။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့စာကိုကျွန်တော်လိုက်နာပါ။ ပို့စ်ရဲ့အစမှာသင့်ကိုငါထားခဲ့တဲ့ဒုတိယအပိုင်းကိုကြည့်ဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်။ အဲဒီထဲမှာ Aroma auto-installer ရဲ့ရွေးစရာတွေကိုခြေလှမ်းလှန်လှန်ပြီးတပ်ဆင်မှုအဆင့်ကိုပြတယ်။
ကျနော်တို့ option ကိုသွားပါ သုတ်, ငါတို့ရွေးချယ်ပါ အဆင့်မြင့် Wipe y Rom နှင့် Kernel တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သောဖိုင်များကိုကူးယူထားသောနေရာ မှလွဲ၍ Wipes အားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည်။
Install option ကိုရွေးပြီး Rom zip သို့သွားပါ, ငါတို့ကရွေးပြီး Rom ၏ installation ကို execute လုပ်ဖို့ဘားကိုရွှေ့။
Aroma installer ၏ညွှန်ကြားချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာပါသည် နှင့် Rom flashing ရဲ့အဆုံးမှာ Restart box ကို uncheck လုပ်ပြီး Next ကိုနှိပ်ပါ Recovery ကိုပြန်သွားဖို့
အခု option ကိုမှ Install ငါတို့ရွေး kernel zip ကျွန်ုပ်တို့ Aroma installer ထွက်လာရန် action bar ကိုရွှေ့လိုက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ၏ပုံစံအရ Aroma installer မှမှန်ကန်သော parameters များကိုရွေးချယ်သည် ကျနော်တို့ action ကို execute ဖို့ Next ကိုခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
Kernel တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့် restart box ကို uncheck လုပ်ပါ ပြီးတော့ Recovery ကိုပြန်သွားဖို့နောက်ထပ် button ကိုထပ်နှိပ်ပါ။
အခုငါတို့ W တစ်ခုလုပ်ကြတယ်Dalvik / cache ကို ipe ပြီးတော့ System Reboot.
ဒီနှင့်အတူငါတို့ရပါလိမ့်မယ် Rom Khongloi Nougat V9 ကိုမှန်ကန်စွာ flashed, Samsung Galaxy S8 ၏အပြည့်အ ၀ port သည်အရာရာတိုင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်သည် Bixby နှင့်အမြဲတမ်းပြသခြင်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » ရွမ် » Samsung Galaxy S6 Edge Plus အတွက်အကောင်းဆုံးသော Rom
Kebin gomez ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်လျှင်၎င်းသည်အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) နှင့်မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်မျှအမှားမကင်းပါ
Kebin Gomez အားစာပြန်ပါ
Gonzalo Munoz ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ဒီ ROM သည် SM-G928X မော်ဒယ်နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါသလား။
ကောင်းသောနံနက်ခင်းပါ၊ rom download link တွင်ဖိုင်မရှိပါ
Rom Khongloi Nougat V9 အများပိုင်
မင်္ဂလာပါ၊ နေကောင်းလား၊ rom link မရှိဘူး၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဗွီဒီယိုကိုအသစ်ပြောင်းပါ။
ဤတွင်ဗားရှင်း 10 ဖြစ်သည် https://mega.nz/#!kIZhhKLa!qP1A8QeohlWO4xOJ7FTQBeMVPWvNDHhGU7qzzIf6LBA
ဒုတိယ file ကို download လုပ်လို့မရဘူး။ ငါ version 10 ကိုသုံးရင်ငါ့အတွက်တော့အကျိုးရှိမှာလား။
နောက်ဘက်ကင်မရာနှစ်လုံးနှင့်သတ္တုကိုယ်ထည်ဖြင့်စစ်ထုတ်သည့် Moto G5S Plus